efitrano famoahambaovao · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny efitrano famoahambaovao
Mediam-bahoaka16 Jona 2019
Dite manokana ho an'ny aretin'andoha ve? Mantra ho an'ny andro ratsy? Tianay hasongadina ao anatin'ny lahatsoratra iray ifandrimbonana ireo fanafody izay natolotr'ireo reniben'ny mpandray anjara ato amin'ny GV.
Mety hisy fiantraikany aminao ve ny Brexit ?
Mediam-bahoaka15 Jona 2019
Nikaroka fijoroana vavolombelona avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpikambana ato amin'ny Global Voices izahay mikasika ny mety ho fiantraikan'ny Brexit aminy.
Iza no tantara tianao indrindra tato amin'ny Global Voices tamin'ny taona 2015?
Misy fomba tsara hafa kokoa hankalazana ny Taom-baovao ankoatra ireo tantara izay atolotry ny vondrom-piarahamonina Global Voices manokana ve?
Dika11 Jona 2019
Arahaba ry GV! Araka ny nampanantenaiko tao anatin'ny lahatsoratro farany mikasika ireo fanavaozana ato amin'ny Lingua, androany isika dia hanomboka handefa singa miavaka iray vaovao ho an'ny GV manontolo: Ny safidy ahafahana mametraka olona mihoatra ny iray ho mpandray anjara anaty lahatsoratra iray!
Horonantsary toy ny ahoana momba ny faritra misy anao no ho atoronao anay?
Blaogim-Piarahamonina GV10 Jona 2019
Tianay hasongadina ireo sarimihetsika avy any amin'ny faritra misy anareo izay mendrika ny ho fantatra. Ho atao anaty lahatsoratra iray ifandrimbonana ireo valinteny rehetra ary ho avoaka amin'ny pejy fandraisana ato amin'ny Global Voices.
Hanomboka ny asany ny Tonia mpanatanteraka vaovao amin'ny janoary 2019!
Mediam-bahoaka26 Desambra 2018
Monina ao Prague amin'izao fotoana izao, za-draharaha eo amin'ny sehatry ny famoahan-dahatsoratra, fanavaozana sy fampivelarana ny fampitam-baovao i Filip
Taridàlana14 Desambra 2018
Amin'ny ankapobeny ny Global Voices dia vohikala iray faharoa amin'ny fizaràna tatitra fanadihadiana - fidiantsika ireo loharano izay mandefa mivantana amin'ny aterineto ary tanisaintsika ireo fanadihadiana navoakan'ireo media hafa. Saingy matetika, isika no manao ny tatitra voalohany.
Fampiasàna ny Grammarly ho an'ny GV?
Mediam-bahoaka10 Oktobra 2018
Tolokevitra amin'ny tokony hampiasàna ny Grammarly ho an'ny Vondrompiarahamonina GV.
Ny [inoako] fa isika, ary ny zavatra [eritreretiko] fa [tsara indrindra] ataontsika
Mediam-bahoaka01 Aogositra 2018
''Tamin'ny fiafaran'ilay andro fandinihana, nila nanolotra ny maha-isika antsika, ny zavatra ataontsika, ny zavatra iriantsika ary ny fomba iadiantsika manoloana ireo vondrona mpikaroka avy amin'ny sekoly tranainy ao anatin'ireo rindrina mangatsikan'ny Akademia Frantsay ny tenako.''